Novosibirsk State University Medical - Mbbs Study in Russia
Medical Novosibirsk State University Details
gaabinta : NovSMU
aasaasay : 1935
Ha iloobin in aad wada hadlaan Novosibirsk State University Medical
Qorto Novosibirsk State University Medical
In 2010 State Novosibirsk Jaamacadda Medical (NSMU) u dabaal-guuradii 75aad! Taariikhda jaamacadda waa si dhow la xiriira taariikhda adeegyada caafimaadka dadweynaha ee magaalada Novosibirsk, ee koonfurta-galbeed Siberia iyo, laga yaabee, in dalka oo dhan.
75 sano oo ganacsi ka dhigan tahay taariikh hodan ah. Iyada oo dhammaan sano kuwa NSMU ayaa fulinta hal shaqada taas oo bara inay bogsiiyo dadka. Jaamacadda ayaa lagu barayay oo barbaarrada iyo haweenka si ay u fahmaan ku waajib ah xirfadle dhakhtar caafimaad si ay ugu adeegaan dadka oo layska kaga qabataa hawsha this.
Baridda si aad ugu bogsiisid waa dhib badan ka barayay wax xirfadaha kale ee caalamka. qarniyada badan dhakhaatiir iyo aqoonyahanno cajiib ah ayaa ka qalin NSMU ah sanadihii la soo dhaafay. aqoonyahano, Professor, madaxda hay'adaha caafimaadka badan oo ka mid yihiin kuwa ka qalin our. In 75 sano, ka badan 32 kumanaan dhakhaatiir ka qalin Jaamacada. Year sano ka dib dhakhaatiir da'yar qalin galay shaqo ee caafimaadka dadweynaha iyo cilmi baarista caafimaadka.
Dadka shaqeeyay iyo bartay at NSMU sannadihii la soo dhaafay waa taariikh NSMU ah. Waa run in taariikhda la sameeyey by dadka iyo caddeyn nool of this waa 75 of NSMU qalin daro liiska Qasnadaha NSMU Human. noloshooda isdhaafsan la taariikhda Novosibirsk iyo Russia muujiyaan sida hal qof samayn kartaa isbedel. By siinta aqoontooda, xirfadaha, iyo naftiinna u xirfad iyo bulshada, dadkan imprinted magacyadooda ee taariikhda NSMU.
NSMU kibir leh dhammaan dadka cajiib ah halkan ka shaqeeya oo qeyb horumarinta dawo ma aha oo kaliya in Novosibirsk iyo Russia laakiin sidoo kale adduunka oo dhan. Madaxda NSMU maanta dhakhaatiir aasaasay oo sidoo kale ka shaqeeya rugaha caafimaadka magaalada iyo isbitaalada.
Raadinta galay mustaqbalka Novosibirsk State University Medical ah, waxaan dhihi karaa hubaal ah in jaamacada ay sii wadi doonto kobaca sida ay had iyo jeer uu leeyahay. 75 sano ka hor NSMU uu lahaa mid ka mid ah macalimiinta oo kaliya. Maanta waxaan heysanaa 8 Caqlina laakiin tani ma aha noo xadka. hay'adaha daryeelka caafimaadka dadweynaha waxay u baahan yihiin dhakhaatiir, xisaabaadka, qareennada, ku takhasusay daryeelka caafimaadka dadweynaha. Waxaan sii wadi doonaa si ay u koraan by jabiyay qufulan, casriyeeyo habka waxbarashada, dejinta heerarka sare ee bara iyo ardayda si ay u siiyaan bulshada la takhasus gaar ah si wanaagsan loo tababaray daryeelka caafimaadka dadweynaha.
Raktarka ah Novosibirsk State University Medical ah
Kuliyada diyaarinta precollege tababar xirfadeed
Kuliyada formation ugu walaalaynayo
Kuliyada shaqada bulshada
Kuliyadda dhaqaalaha iyo maareynta adeegyada caafimaadka dadweynaha
Kuliyada cilmi nafsiga clinical
macalimiinta deegaanka dabiiciga ah
Kuliyada horumar shahaadada xirfadda xirfadeed
In 1935 goobta Novosibirsk ee Institute for Tomsk Doctor Tababarka ku yaalla Novosibirsk waxaa habayn galay Institute Medical Novosibirsk ah (NSMI). Waagaas Machadka lahaa kaliya hal kulliyad ka ahaa Kulliyadda General Medicine halkaas oo ardaydu ka Medical Omsk iyo Tomsk ah Machadyada sameeyey ay shaqada koorsada 3D-sano. In 1936, Ardayda marka hore ayaa la dhigey.
In 1999 Machadka Caafimaadka Novosibirsk State noqday Novosibirsk Academy Caafimaadka Gobolka. In 2005 Academy noqday Novosibirsk Jaamacadda State Medical.
Sida waqti maray laboratories NSMU ayaa koray oo soo hagaagay, kulliyadaha cusub iyo koorsooyin muuqday. In ka badan 32 kumanaan ka mid ah dhakhaatiirta cusub ayaa ka qalin jabiyay Jaamacadda ah, daraasiin tobanaan kun oo dhakhaatiirta caafimaadka heshay tababar xirfadeed oo dheeraad ah halkan. qalin NSMU shaqeeyaan oo dhan Ruush Federation iyo sidoo kale in wadamada CIS, ee USA, Germany, Israa'iil, Australia iyo wadamo kale. Shaqaalaha waxbarasho University ka qeyb qaadanaya mashaariicda caalamiga ah ee caafimaadka, tagaan shirarka, miyi iyo symposiums, shaqeeyaan iyo aad u hesho tababar dheeraad ah ee jaamacadaha adduunka oo dhan. NSMU qalin shaqada ee jaamacadaha si fiican u yaqaan in Europe (Germany, Belgium, France), Japan, USA, New Zealand iyo Australia.
In 2006, Jaamacadda loo aqoonsaday mid ka mid ah 100 wax soo saarka ugu fiican ee Russia. Isla sanadkaas NSMU heshay abaalmarinta ah guulaha weyn ee waxbarashada iyo ku guuleystay tartanka “Novosibirsk Trade Mark 2006”. Bishii September ee 2010 Jaamacadda Novosibirsk State Medical u dabaal-guuradii 75aad.
Ma rabtaa wada hadlaan Novosibirsk State University Medical ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Novosibirsk State Medical on Map
dib u eegista University Medical Novosibirsk State
Ku biir si ay ugala hadlaan of Novosibirsk State University Medical.
Peoples’ University of Friendship Russia Moscow
University Financial hoos Dowladda Ruushka Moscow